'नयाँ भेरियन्ट यसअघिको भन्दा जटिल र घातक छ' | Sajhakhabar 'नयाँ भेरियन्ट यसअघिको भन्दा जटिल र घातक छ' | Sajhakhabar
हाल नेपालमा देखिएको नयाँ भेरियन्ट कस्तो भाइरस हो ?, कुन उमेर समूहका व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्छ ? र अघिल्लो भेरियन्टको तुलनामा यो कति घातक छ ? भन्ने विषयमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सलटेन्ट सरुवारोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलासँग गोरखापत्र अनलाइनका लागि आशा साहले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल देखिएको नयाँ भेरियन्ट अघिल्लो भेरियन्टले ल्याएको हो । यसअघिको भन्दा नयाँ भेरियन्ट जटिल र घातक छ । महामारी निम्त्याउने कुनै पनि भाइरस भेरियन्टमा परिवर्तन हुँदै आउँछ । यो नयाँ भेरियन्टको कोरोनाभाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । यसले घेरैलाई सङ्क्रमण बनाएको छ । साथै सङ्क्रमितमा लक्षण देखिने र सङ्क्रमित मानिसलाई मृत्युवरणको मुखमा लैजानेसम्मको देखिएको छ ।
सङ्क्रमित व्यक्तिसँग एउटै कोठामा बस्दा सङ्क्रमितले खोक्दा, हाच्छुयूँ गर्दा अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । किनभने बन्द कोठामा भाइरस तीन घण्टासम्म बस्न सक्छ । एयर वान भएको कारण सङ्क्रमण धेरै हुने देखिएको छ । एउटै परिवारका सबै परिवार सङ्क्रमित हुनु भनेको त्यही नै हो ।
अहिलेसम्म खोप लगाएका मानिसहरु सुरक्षित नै देखिनुभएको छ । सङ्क्रमित भएर उपचारका लागि अस्पताल आएपछि निको भएर घर फर्किनुभएको छ । पक्कै पनि खोपले केही न केही काम गरेको छ । कामै नगर्ने होइन । कुन हदसम्म कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अध्ययनले भन्छ । अहिलेसम्म खोप लगाएका व्यक्ति सिकिस्त भएर आउनुभएको छैन । हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई हेर्नु सङ्क्रामक भएर नजिकबाट बिरामीलाई जाँच गरिरहेका छौ । यस हिसाबले हेर्दा खोप प्रभावकारी नै छ ।
अहिले विवाहको महिना भएकाले धेरै भोजभतेर हुने गर्छ । यसबाट कोरोना फैलिरेहको भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् । यसरी कुनै सङ्क्रमित भोजभतेरमा गएको खण्डमा उसले धेरैलाई नयाँ भेरियन्ट सार्न सक्छ । त्यसैले मास्कको प्रयोग गर्ने, भिडभाड हुने ठाउँमा नजाने, आफ्नो बानीव्यहोरा परिवर्तन गर्ने, भोजभतेर बन्द गर्ने र अनावश्यक जमघट नगर्ने आदिमा ध्यान दिने । अर्को कुरा सरकारले जतिसक्दो चाँडो सम्पूर्ण व्यक्तिहरुमा खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ ।